Fanampiana avy any ivelany mikasika ny insécurité alimentaire any Atsimo
Date: 11 janvier 2017 - 11:55
Fa dia tsy misy na inona na inona ataon'ny fanjakàna mihitsy ve rangahy hatrizay hiatrehana ny hain-tany sy ny tsy fahampian-tsakafo any Atsimo??
Toa miandry tataka avy @ fanampiana any ivelany foana.
Sa atao sorona mihitsy ve lay vahoaka any atsimo hampiraraka ny euros sy ny dollars e?
Mba matahora an'Atra ry zalahy a!
Re: Fanampiana avy any ivelany mikasika ny insécurité alimentaire any Atsimo
Date: 12 janvier 2017 - 09:17
Tadidinareo ve ikala ony ilay nitomany nalaza be t@ février 2016 ?
Kere ny tany atsimo fa nataon'ny fitondrana izay hevitra rehetra nanafenana azy. Nony tonga tany tampoka Andry Rajoelina nitondra fanampiana vao nikoropaka.
Dia nanao ilay concertation nationale hoe tsy hampiverina intsony ny kere.
Vokany ? Efa nanomboka t@ octobre 2016 ny société civile no nandefa fanairana fa ho henjana ny kere any atsimo @ faramparan'ny taona 2016 sy ny fiandohan'ity taona 2017 ity. Hatr@ izao dia tsy mbola nanampin-tsofina foana ity fitondrana ity. Mahamenatra fa dia ny PAM no mamonjy ireo mponina noana fa ny fitondrana naleony nanao fanasam-be nanasana vahiny maro.
Date: 12 janvier 2017 - 09:30
efa t@ février 2015 aza io minisitra io no nanao ilay atelier cluster nandaniana volabe nefa dia miverina foana ilay problème.
Nefa dia lazaina foana fa hoe nahomby à + 95% ilay departemanta